Maitiro ekuchenesa goridhe pendant - 6 nzira | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Goridhe ndeyakanaka, inodhura simbi, asi kunyangwe nenguva inogona kurasikirwa neyayo pristine radiance uye luster. Zvishongo zvegoridhe - makenduru uye makenduru - ave akasviba uye anopera, afukidze negropa rakachenuruka. Ivo nguva nenguva vanofanirwa kuronga yekuchenesa.
Kune vezvishongo, basa rakadai richakubhadhara zvakanyanya. Zvinogoneka kuchenesa zvishongo zvendarama nemaoko angu?
Neichi chiitiko, unogona kushandisa inonzi mishonga yemakwenzi. Dzese dzadzo dzakachipa, dzakashanda, dzinokwanisa kuunza kushongedza mukutaridzika kwakanaka.
Kuchenesa goridhe neGoI paste
Nyatsosuka makenduru kubva kune chero goridhe, kusanganisira zvigadzirwa zvine nzvimbo yakashata. Pamusoro peGoI paste, iwe unozoda mhezi yemvere, ammonia, yekushambidza dhiza uye bhuroka rezino.
Kutanga, isa paste kune flap uye svina pendant kumativi ese zvakazara sezvinobvira.
ipapo gadzirira mhinduro yeammonia (1 tsp), mvura yakachena (200 ml) uye disergent (zvakare 1 tsp);
nyudza zvishongo mune iri mvura kwehafu yeawa;
bvisa goridhe kubva pamhinduro, svina nzvimbo dzakasvibiswa nemazino;
suka chinhu chacho nerukova rwemvura inodziya kubva pombi;
Pukuta yakaoma nejira rakachena.
Vhiniga, hanyanisi uye mandimu - inoshanda goridhe rakachena
Kuchenesa nezvigadzirwa zvepanyama kwakakodzera kune tsvina diki, inopesana nemafuta mafirimu pane pamusoro pezvigadzirwa zvegoridhe.
Moisten potoni pad ne 9% vhiniga (tafura kana apuro) uye pukuta goridhe. Mhedzisiro yakafanana nevhiniga ine anyezi (muto wayo) uye mutsva wedimu.
Zvishongo Zvekushambidza Mafuru
Unogona kuzvitenga zviri nyore muchitorooro kana kuti shopu yemahara. Tora mari yakagadzirirwa kusevha goridhe. Vachave neamonia. Bata pendant kana pendant nejira nyoro rakanyungudutswa muchinhu chakadaro. Kana chigadzirwa chacho chakanyura kwazvo, chiise icho mumvura zvizere - kwemaminetsi akati wandei kana kuti yenguva yakakurudzirwa nemugadziri wemafuta ekuchenesa goridhe (mumirairo kana papakeji).
Tarisa! Zvigadzirwa zveAmoniya zvinogona kushandiswa chete kune zvigadzirwa zvisina mabwe.
Tenga mhinduro yekurapa yeammonia mune mufesi. 10% yakakodzera. Kana mumwe munhu akanganwa, isu tinoyeuka - ichi immonia. Cheneswa senge mune yekumberi yekubheka. Mhedzisiro yacho haingaori zvakanyanya, uye mutengo wacho uchave wakachipa.
Imwe "sekuru nzira" - yekuchenesa goridhe
Haudi kuyedza ne "chemistry"? Edza kujekesa iyo goridhe pendant nenzira yekare yakagadzirwa. Kuyera 50 ml yevhu doro, dururira yakasviba mazai yolk mumudziyo naro. Rova musanganiswa uye, kunyorovesa machira ekotoni kana ngura mariri, kupukuta kushongedza kwacho kakati wandei. Ipapo geza nemvura yakachena uye yakaoma.
Mumakoni ekutengesa zvishongo, vanowanzo kutengesawo zvigadzirwa zvekuchengeta goridhe. Aya ndiwo manyorerwo akaomesesa nenzira ye pasita kana gira. Izvo zvakagadzirwa pahwaro hwepetroleum jisi / mafuta pamwe nekuwedzera kwekaki, chena magnesia, lead carbonate, sedimentary dombo (tripoli), corundum (emery).
Mari dzakadaro dzinokutendera kuti uchenese pendenti yegoridhe zvakanyatsonaka sezvinobvira, dzosera kune yakakwana mamiriro, yakasvibira kupenya. Kunyangwe kuvepo kwemasisitimu anogadzirisa mupasita, anoita zvinyoro uye zvinonaka. Vanotengesa zvishongo salon pachavo goridhe yakachena nenzira dzakadaro kana zvishongo "zvakanamatira" nepahwindo uye zvarasika kutaridzika.
Maitiro ekuchenesa goridhe kumba
Ma tattoo enguva pfupi anogara kwenguva yakareba sei? Mhando dzadzo uye imwe yenzira dzekushandisa
Nzira yekuchenesa kanivha yesirivha kumba kumba nekukurumidza?
Gold goridhe kuti irambe ichienderana nenguva
Posted in fashoni
Mibvunzo ye30 mu database yakagadzirwa mu 0,379 masekondi.